Database Email Email Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Idathabhesi Lokhemisi
Ikheli Ledatha Yekhemisi
Uhlu lwe-imeyili ekhemisi lufaka yonke imininingwane yokuxhumana ngobuchule e-USA. Uma ufuna ukufinyelela kumuntu wasekhemisi ngokuthengisa imikhiqizo noma izinsizakalo zakho ungazama ngohlu lwe-imeyili yethu ekhemisi. Uhlu lwe-imeyili ekhemisi lunayo yonke imininingwane yokuxhumana ekhemisi ongayisebenzisa ukumaketha imikhiqizo yakho.
Lokhu kuthuthukiswa kwezobuchwepheshe kusekwe engxenyeni yedathabheyisi ekhemisi egcwele imininingwane evela kumasistimu wamakhemisi okungenani amabili ahlukile ukuxhumana.2. Isakhiwo sedatha yesimangalo i-1, lapho itafula ledatha elihlobene lihlobene nedatha yokuhweba ekhemisi kusuka ezinhlotsheni ezimbili ezihlukene zezakhiwo ze database ukuze idatha yokuthengiswa ekhemisi ilungiselelwe ukutholakala futhi ilawulwe nge-schema yedatha yeseshini.
Ngokwengeziwe, i-database yezidakamizwa ye-FDA ingasetshenziswa ukusesha izidakamizwa okwamanje ezihamba ngezivivinyo zomtholampilo kanye / noma inqubo yokuvuma. I-MedImpact ne-NCPDP lihlanganyele ukuhambisa amandla ekuqoqeni nasekufinyeleleni imininingwane yasekhemisi kanye nemibhalo ukunikeza imboni yezokunakekelwa kwempilo amathuluzi nobuchwepheshe obudingekayo ukusiza lula ibhizinisi futhi kuncishiswe izindleko.
Thenga Uhlu Email imeyili
Ugcino lwamakhemikhali lungenye yohlu lwe-imeyili lwakamuva lwelinye izwe. Insizakalo yasekhemisi ifake wonke ama-imeyili athuthukile ekhemisi, ikheli, izinombolo zocingo, nayo yonke imininingwane yokuxhumana. Uma ufuna ukuthola i-database ekhemisi engcono kakhulu yanoma iliphi izwe, kufanele usebenzise database yethu futhi lonke ulwazi mayelana nenkampani yethu lungalandela.
Sinikeza ifayela ledatha yangempela, eliwusizo kakhulu emsebenzini wakho. Sizama ukuhlinzeka insizakalo ye-95% eqinisekisa isilinganiso sakho sempumelelo. Sicela usithinte ukuthola imininingwane ethe xaxa yamakhemisi.
Ikheli le-imeyili Oxhumana Nokhemisi
Inombolo yocingo ekhemisi
Inombolo yefekisi yasokhemisi
Izindleko Eziphelele: $ 350
Imibuzo Database Yemithi Nempendulo